समाचार Archives | Page 30 of 554 | News Dainik
७ माघ २०७६, मंगलवार १२:२० समाचार
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रमा खुलेका मदिरा र भट्टी पसललाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हटाउने तयारी गर्दैछ । सोका लागि कोषले स्थानीय वडा कार्यालयसँग परामर्श लिने कार्य सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ सिफललगायतका क्षेत्रमा भने वडा कार्यालय र सामुदायिक प्रहरीको संयुक्त अग्रसरतामा यी पसल हटाइने भएको छ । पशुपति क्षेत्रलाई मांस मदिरामुक्त क्षेत्र बनाउने क्रममा पहिलो चरणमा भट्टी पसल चहार्दै मगन्ते जीवन बिताइरहेकालाई कोषले हटाएर मानव धर्म सेवा समितिको संरक्षकत्वमा …
उपसभामुखले दिइन् राजीनामा
६ माघ २०७६, सोमबार १५:३७ समाचार
काठमाडौं । उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी छन् । तुम्बाहाङ्फले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद सचिवालयमा राजीनामा बुझाएकी हुन्। साँझ ४ बजेको संसद् बैठकपछि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना धारणा राख्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सत्तारुढ नेकपाले हिजो सभामुख पदका लागि स्थायी कमिटी सदस्य अग्नी सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उपसभामुख निर्वाचित डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आज राजीनामा दिएकी हुन्।
उपसभामुखले राजीनामा दिंदै
६ माघ २०७६, सोमबार १३:१७ समाचार
काठमाडौं । उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अघि नै राजीनामा दिने भएकी छिन् । सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार उपसभामुखले राजीनामा दिन लागेकी हुन् । सत्तारुढ नेकपाले हिजो सभामुख पदका लागि स्थायी कमिटी सदस्य अग्नी सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उपसभामुख निर्वाचित डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आज राजीनामा दिने नेकपाले जनाएको छ।
अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा हट्यो
६ माघ २०७६, सोमबार ११:४९ समाचार
सिन्धुपाल्चोक । बाह्रविसे नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा हटाएको छ । स्थानीय प्रशासन, आन्दोलनरत नेपाली काँग्रेस र नगरपालिका बिच भएको संवादमा सहमती भएपछि स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा हटाएको हो । आइतबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले बाह्रबिसे नगरपालिकाका अधिकृत युगबहादुर खडकाको संयोजकत्वमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरु, प्रहरी अधिकृत तथा अमिन सम्मिलित सात सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र उचित निर्णय लिई अघि बढने सहमती …
गोसाइँकुण्ड पदयात्रामा गएका दुई पर्यटक सम्पर्कविहीन
६ माघ २०७६, सोमबार ११:४५ समाचार
रसुवा । गोसाइँकुण्ड पदयात्रामा गएका दुई जना पर्यटक हिमपातका कारण तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर–७ का १९ वर्षीय जापान तामाङ र उनका एक साथी सम्र्पकविहीन भएका हुन् । उनीहरू नुवाकोटको दुप्चेश्वर–१ फेदीबाट सम्र्पक विहीन भएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए । तामाङ दिदी सुस्मितासँग शुक्रबारसम्म सम्पर्कमा रहेको र दुई रात हिउँ परेका कारण फेदीमा बसेको बाहेक अन्य कुरा थाहा नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताए । …
विप्लव समूहले गर्‍यो तीन स्काभेटरमा आगजनी
६ माघ २०७६, सोमबार १०:२४ समाचार
मोरङ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा विप्लव समूहले स्काभेटरमा आगजनी गरेका छन् । मिक्लाजुङ १ को बाँसबिरे भन्ने ठाउँमा गएराति १० बजे तीन स्काभेटरमा विप्लव समूहले आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले जानकारी दिए । किसानचोक-रमिते सडकखण्ड निर्माणकालागि प्रयोग गरिएका स्काभेटरमा आगजनी गरिएको हो । सो सडकखण्ड प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । आगजनी पश्चात तत्काल प्रहरी परिचालन गरी दोषीको खोजी भइरहेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक …
६ माघ २०७६, सोमबार १०:१९ समाचार
तनहुँ । जिल्ला अदालत तनहुँले जबर्जस्ती करणी मुद्दाका एक अभियुक्तलाई १२ वर्ष छ महिना कैद फैसला गरेकोे छ । जिल्ला न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलकोे इजलासले सो मुद्दामा पक्राउ परेका गोरखा पालुङटार नगरपालिका–५ का कृष्णकुमार विकलाई आइतबार सो कैद फैसला सुनाएको हो । गत असार १४ गते तनहुँको भानु नगरपालिका–३ तुरतेरस्थित पाँच वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा विकलाई कैद सजायसहित पीडितलाई रु एक लाख क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुदर्शन …
६ माघ २०७६, सोमबार ०८:३८ समाचार
काठमाडौं । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहका सम्पूर्ण विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन ुहेन भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सबै कक्षाका पाठ्यक्रमका प्रारुप तयार गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा शैक्षिक सत्र ०७७/७८ मा कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनेछ। दोस्रो चरणमा कक्षा २, ३, ६ र १२ को परिवर्तन हुनेछ। त्यसपछि कक्षा ४, ५, ७, ८ र ९ को पाठ्यक्रम क्रमसँगै परिवर्तन हुने सममाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ। २०८० सालभित्र सबै …
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन : आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुँदै
६ माघ २०७६, सोमबार ०७:५७ समाचार
काठमाडाैं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ ९ गते बिहीबार हुने निर्वाचनको सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुँदैछ । निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम ४८ घण्टा अगाडी अर्थात माघ ६ गते सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन मौन अवधि र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको …
६ माघ २०७६, सोमबार ०७:१८ समाचार
काठमाडाैँ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत अन्य मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन्। विभागीय मन्त्री सहकुलपति रहने गरी पर्यटन र रक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय स्थापनाको दौडमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अहिले नै ६ वटा प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) चलाइरहेको छ।पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री (पर्यटन) सहकुलपति रहने गरी होटेल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान …
554 पृष्ठ मध्येकॊ पृष्ठ नं 30« पहिलॊ...1020«2829303132 » 405060...अन्तिम »